Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izwe | Isifunda » Italy » I-Casino eyisakhiwo sodumo yase-Rome dell'Aurora ingena endaweni yendali
I-Casino dell'Aurora – ikhaya lomdwebo odongeni osilingi emhlabeni kuphela opendwe yiCaravaggio, onenani elilinganiselwa ku-€471 million ($540 million), ingelinye lamakhaya abiza kakhulu ake afakwa emakethe.
I-2,800-square-metres (30,000 square feet) Casino di Villa Boncompagni Ludovisi, eyaziwa nangokuthi i-Villa Aurora, eseduze Rome's Via Veneto, ingena ngaphansi kwebhlokhi namuhla "endalini yekhulunyaka."
Casino dell'Aurora - ikhaya eliwukuphela komdwebo odongeni odwetshwe yiCaravaggio emhlabeni, onenani elilinganiselwa ezigidini ezingama-471 (amaRandi ayizigidi ezingama-540), ingelinye lamakhaya abiza kakhulu ake afakwa emakethe..
Okuningi kokubaluleka kwayo kubalulwe emidwebeni yayo yasezindongeni ngabadwebi be-Italian Baroque i-Caravaggio ne-Guercino, kanye nezinye izimpahla zamasiko.
Amakamelo amaningana aqoshiwe nguGuercino, okuhlanganisa nelilodwa elibonisa u-Aurora, unkulunkulukazi wamaRoma wokusa. Igama lalesi sakhiwo lisuselwa kulo msebenzi, njengoba lihlobisa ihholo elikhulu lokwamukela izivakashi.
Impahla eyigugu kakhulu ye-villa umdwebo osesithombeni we-Caravaggio obonisa i-Jupiter, i-Neptune, ne-Pluto. Ukusukela ngo-1597 futhi kwatholwa kabusha ngo-1968, iwukuphela komdwebo odongeni odwetshwe umdwebi odumile. Lokhu kukodwa kubiza imali elinganiselwa ku-€310 million.
Ngaphandle kwamafresco ayigugu, Casino dell'Aurora inomlando wezivakashi ezidumile phakathi namakhulu eminyaka, njengombhali waseMelika-waseBrithani uHenry James kanye nomqambi waseRussia uPyotr Tchaikovsky.
I-Casino dell'Aurora yakhiwa ngo-1570 futhi ibingelomndeni wakwaLudovisi kusukela ekuqaleni kwawo-1600. Ngemuva kokushona komnikazi wayo wokugcina, iNkosana uNicolo Boncompagni Ludovisi, ngonyaka ka-2018, kwaba yindaba yengxabano ende yefa phakathi kwamadodana amathathu omshado wakhe wokuqala nonkosikazi wakhe wesithathu, inkosazana yokuzalwa yaseMelika uRita Jenrette Boncompagni Ludovisi. Lesi sakamuva sichithe ingxenye enkulu yeminyaka engu-20 edlule silungisa le ndawo.
Izinkantolo zigcine zikhiphe isinqumo sokuthi impahla idayiswe. Noma ngubani othenga i-villa, evikelwe ngu Italian imithetho yamagugu amasiko, izophoqeleka ukuthi ichithe enye imali eyizigidi eziyi-11 zamarandi ekubuyiseleni.
Ibhidi yokuqala yendawo isethwe ku-€353 million (cishe amaRandi ayizigidi ezingama-401).
I-Indonesia izohambisa inhlokodolobha edolobheni elisha e-Borneo jungle
Memeza! Impendulo entsha Yezokuvakasha Yomhlaba e-Ukraine ithi...
ISaudi Arabia isusa yonke imikhawulo yokungena ku-COVID-19…
I-Oxytocin Market 2022 Abadlali Ababalulekile, Ukuhlaziywa kwe-SWOT, Ukhiye...
Imakethe yeLasers yokususwa kweTattoo ithole i-CAGR ye...
Hamba Emhlabeni We-Post-COVID
I-Aloft Bali Kuta: Ihhotela Elisha laseBali